စုချစ်သူ: January 2013
ဆရာမောင်ထွန်းသူရဲ့ရှန်ဂရီလာစာအုပ်ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက် လက်ဆောင်ပေးချင်လို့ ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ ရှာကြည့်တာ မရခဲ့ပါဘူး။ အွန်လိုင်းက စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာလည်း ရောင်းတာ မတွေ့မိဘူး။ အဲသာကြောင့် စာဖတ်သူများ အားလုံး ဖတ်ခွင့်ရနိုင်ရန် မြန်မာကျူးပစ်ဖိုရမ်မှာ ၂၀၁၁ ကတည်းက စာရိုက်ပေးနေတာ အချိန်မရတာနဲ့ စာမျက်နှာ အနည်းငယ်ပဲ ရိုက်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ မောင်လေး တစ်ယောက်က သူ အဲ့ဒီစာအုပ်ရှာနေတာ ပန်းဆိုးတန်းမှာလည်း ခြေတိုနေပြီ၊ အဟောင်းတန်းမှာတောင် ရှာလို့ မရတော့ဘူး မြန်မြန်ဖတ်ချင်ပါတယ် ဆိုလို့ စာရိုက်ဖို့ကလည်း ကြာမှာမို့ စကန်ဖတ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်က စကန်ဗားရှင်းမို့ သိပ်မကြည်လင်ရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါနော်။
James Hilton ရေးတဲ့ Lost Horizon (ပျောက်ဆုံးသွားသည့် မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း) ဘာသာပြန် ဆရာမောင်ထွန်းသူရဲ့ ရှန်ဂရီလာဟာ ဒဏ္ဍာရီဆန်လှတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဂန္ထ၀င်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက် ရင်ထဲမှာ တလှုပ်လှုပ်တခတ်ခတ် လွမ်းတသသဖြစ်ကျန်ရစ်ပြီး ရောက်တတ်ရာရာစိတ်ကူးနဲ့ ကွန့်မြူးနေမိတယ်။ စားလည်းဒီစိတ် အိပ်လည်းဒီစိတ်နဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ အရပ်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရာနယ်မြေလေးတစ်ခု၊ ဘယ်သူမှ ရေရေရာရာ သေသေချာချာ မသိပေမယ့် ရှိကိုရှိနေရမယ်လို့ ယုံကြည်မိတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုဆီကို တစ်နေ့မှာတော့ ရောက်ရတော့မလိုလို စိတ်ကူးယဉ် တိမ်တောင်ကြားမှာ တလူးလူးတလွန့်လွန့်နဲ့ပေါ့။
ဘာသာပြန်သူ ဆရာမောင်ထွန်းသူ အညွှန်းမှာလည်း “မြန်မာပြန်သူအဖို့တော့ ဤ၀တ္ထု လော့ဇ် ဟော်ရဇုန် သို့မဟုတ် ရှန်ဂရီလာသည် အလွန်ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် ၀တ္ထုတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ဆင်ခြင်စဉ်းစားစရာ ကောင်းသည့် ၀တ္ထု တစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ စိတ်ကူးယဉ်စရာ ကောင်းသည့် ၀တ္ထု တစ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်နေသည်။ စာဖတ်သူများ အနေဖြင့်လည်း ဤအတိုင်းပင် ခံစားကြရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။” လို့ ရေးထားခဲ့ပါတယ်။
ရှန်ဂရီလာဆိုတာ တိဗက်ဒေသ၊ ဟိမ၀န္တာတောင်တန်း ခွန်းလွန်းတောင် အနောက်ပိုင်းအဆုံးက ဒေသတစ်နေရာမှာရှိတဲ့ အေးချမ်းသာယာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ တောင်ကြားဒေသလေးလို့ ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီနေရာလေးဟာ ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ အဆက်အသွယ်မရှိ၊ သီးခြားရပ်တည်နေတဲ့ ဆိတ်ငြိမ်းရာအရပ်လေးလည်း ဖြစ်သတဲ့။ သိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့ လာမာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အဆုံးအမအောက်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ အဲဒီရှန်ဂရီလာဒေသက သူတွေဟာ ဥာဏ်ပညာ အလွန်ကြီးမားကြပြီ လောဘ ဒေါသ မောဟတွေ မရှိသလောက် လျော့နည်းကြတယ်တဲ့။ သာမန် လူ့သက်တမ်းထက် ပိုမိုရှည်လျားစွာ နေထိုင်နိုင်ကြတယ်လို့လည်း ဆိုတယ်။ ရှန်ဂရီလာဒေသမှာ ထွက်ရပ်ပေါက် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ လူတွေရဲ့ အတိတ်နဲ့ အနာဂါတ်ကို ပြောပြနိုင်တဲ့ တိဗတ် ဘုန်းတော်ကြီးတွေဟာ အေးချမ်းစွာ တရားကျင့်ကြံ နေထိုင်လျက်ရှိကြလို့ တရားဓမ္မထွန်းကားတဲ့ ကမ္ဘာ့အစိမ်းရောင်နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသတဲ့။
ဆရာမင်းသိင်္ခကတော့ (Shambhala) ရှန်ဘဲလာဆိုတာကို ကိုးကားပြီး အဲဒီလို ထွက်ရပ်ပေါက် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မြန်မာလိုပြောရင်တော့ ၀ိဇ္ဇာ ဇော်ဂျီတွေနေတဲ့ ဒေသအကြောင်း သူ့ရဲ့မဟာမြိုင်ခရီးသည်ဝတ္တုမှာ ရေးသားခဲ့တာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စနေမောင်မောင်နှင့်မြေလျှိုးမိုးပျံဂိုဏ်း စာအုပ်ထဲမှာလည်း ဒီရှန်ဂရီလာထဲက ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်တွေကို မှီငြမ်းပြီးရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
စာရေးဆရာ ဂျိမ်းဟစ်လ်တန်ဟာ ဒီဝတ္ထုကို မထုတ်ဝေခင် ရှန်ဂရီလာ တည်ရှိတယ်လို့ နာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားတဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း တိဗက်နယ်စပ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ Hunza တောင်ကြားဒေသကို လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ယခုခေတ်အခါမှာတော့ အဲဒီဒေသ အနီးမှာရှိတဲ့ Skardu valley - The Hidden Paradise in Pakistan လို့ လည်းခေါ်တဲ့ တောင်ကြားဒေသကို ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များအတွက် ရှန်ဂရီလာ အပန်းဖြေစခန်းအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်တဲ့။
၂၀၀၁ခုနှစ်မှာ တရုတ်ပြည် Yunnan Province ရဲ့ အနောက်မြောက်မှာ ရှိတဲ့ တီဗက်တန်တွေရဲ့ Zhongdian ဒေသကိုလည်း ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များအတွက် ရှန်ဂရီလာဒေသလို့ တရားဝင် နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။
တရုတ်ပြည်အနောက်တောင်ဖက်စူးစူးက ယန်ဇီမြစ်ကြီး စီးဝင်ရာ အဲဒီရှန်ဂရီလာဒေသဟာ ဒဏ္ဍာရီထဲကအတိုင်း ငြိမ်းချမ်းတိတ်ဆိတ် လှပလွန်းပြီး ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များကို အင်မတန်မှဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ရှန်ဂရီလာ Lost Horizon ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်
၁၉၃၁ခုနှစ် ဗြိတိသျှတို့ အိန္ဒိယကို သိမ်းယူထားစဉ် ဘတ်စကူးမြို့ (အီရန်နိုင်ငံမှမြို့တစ်မြို့)မှာ တိုက်ပွဲအခြေအနေဆိုးဝါးလာတဲ့အတွက် အဲဒီမှာသောင်တင်နေတဲ့လူဖြူတွေ ဘေးကင်းရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းကြရာမှာ ဗြိတိသျှကောင်စစ်ဝန် ကွန်ဝေး၊ သူ့လက်ထောက်အရာရှိ မာလင်ဆန်နဲ့အတူ တခြားခရီးသည်နှစ်ဦးတို့ဟာ ပက်ရှဝါမြို့ (ပါကစ္စတန်နဲ့ အာဖဂန်နယ်စပ်နားမှာရှိ) ကို အထူးလေယာဉ်တစ်စီးနဲ့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်တဲ့။ လေယာဉ်မထွက်ခွာခင် ဘယ်သူမှမသိလိုက်ခင်မှာ အမည်မသိ လူစိမ်းတစ်ဦးက လေယာဉ်မှူးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး သူတို့လေယာဉ်ကို လုယူခဲ့သတဲ့၊ ပြီးတော့ သာမာန်လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးအနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ မောင်းနှင်ဖြတ်သန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်တဲ့ လွန်စွာ မြင့်မားလှတဲ့ ဟိမ၀န္တာတောင်တန်းများနဲ့ တိဗက်တောင်တန်းများဆီသို့ လေယာဉ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနှင်ပြီး သူတို့အားလုံးကို ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံး သူတို့ဆိုက်ရောက်သွားတဲ့နေရာဟာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အသွားအလာ လွန်စွာခက်ခဲပြီး မြေပုံထဲမှာတောင် မည်သူမျှ ရှာမတွေ့နိုင်တဲ့၊ လွန်စွာမြင့်မားလှတဲ့ကရာကာလ်တောင်တန်းကြီးအုပ်မိုးထားပြီး လေးဖက်လေးတန် တောင်နံရံတွေနဲ့ ပိတ်ဆီးကာရံနေတဲ့၊ လပြာရောင် တလက်လက် လင်းလက်တောက်ပနေကာ ထူးခြားဆန်းကြယ် လျှို့ဝှက်နက်နဲမှုတွေပြည့်နှက်နေပြီး ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ တသီးတခြားစီအဖြစ် ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး တည်ရှိနေတဲ့ တောင်ကြားလွင်ပြင် ရှန်ဂရီလာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာ မထင်မှတ်နိုင်ဖွယ်ရာ ခေတ်မှီ အနောက်တိုင်း အသုံးအဆောင်တွေ ရှိတယ်။ အရသာ တမူထူးကဲလှတဲ့ ၀ိုင်တွေနဲ့ လတ်ဆတ် ချိုမြတဲ့ အစားအစာ ပြည့်ဝလုံလောက်စွာ ရှိတယ်။ ကမ္ဘာစာပေနယ်အသီးသီးမှာ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ယူဆထားတဲ့ ဘယ်မှာမှ ရှာလို့မရနိုင်တဲ့ အဖိုးထိုက် အဖိုးတန် စာအုပ်များနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ အံ့မခန်း စာကြည့်တိုက်ကြီးရှိတယ်။ ကမ္ဘာကျော် မိုးဇက် တေးဂီတတွေသာမက ဘယ်အခါကမှ မထုတ်လွှင့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရှိုပင်ရဲ့ တေးဂီတတွေကိုပါနားထောင်ရမယ်။ ဘာသာရပ် နယ်ပယ် အသီသီးကို သုတေသနလုပ်နေသူ ပညာရှင် လာမာဘုန်းတော်ကြီး အလျောင်းအလျာတွေ ရှိတယ်။
ပြီးတော့ ရောင်နီဦးမှာ ပွင့်လာတော့မယ့် ပန်းပွင့်ချပ်လေးတွေရဲ့ အနူးညံ့ဆုံးနဲ့ အသိမ်မွေ့ဆုံး အမှတ်လက္ခဏာ၊ နုနယ်ငယ်ရွယ်လှပခြင်းတို့ရဲ့သင်္ကေတ ဆေးရေးပန်းချီအရုပ်တစ်ခုလို ပန်းနုရောင်ပြေး မန်ချူးမိန်းမပျိုငယ်လေး ရှိတယ်။
သမုဒ္ဓရာထက် ခဏတက်တဲ့ ရေပွက်ပမာလို တိုတောင်းလှတဲ့ လူသားတို့ရဲ့ခဏတာ ဘ၀ခရီးမှာ အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျ လှုပ်ရှားမှုဆိုတာတွေ လျော့နည်းအောင်၊ အိုမင်းရင့်ရော်မှုနဲ့ သေခြင်းတရားကိုပါ အလွန့်အလွန် နှေးကွေးစွာရောက်ရှိလာစေနိုင်အောင်၊ မြင့်မြတ်တဲ့သဘောထားတွေ နဲ့ စိတ်ချမ်းမြေ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်လာအောင် ကျင့်ကြံနိုင်တဲ့ ကျင့်စဉ်တွေ နဲ့ လမ်းညွှန်ပြသပေးမယ့် ၁၈ရာစု အစအဦးကတည်းက မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အသက်၃၀၀ နီးပါး ထွက်ရပ်ပေါက် လာမာဂိုဏ်းချုပ်ကြီး ဖာသာပါးရော့ရှိတယ်။
တကယ်တော့ ဒီဝတ္တုဟာ သာမန်စွန့်စားခန်းဝတ္တုတစ်ပုဒ် ဒါမှမဟုတ် သာမန်လျှို့ဝှက်သည်းဖိုဝတ္တုတစ်ပုဒ် မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ အချိန်ရဲ့သဘောသဘာဝ အချိန်ရဲ့အရေးပါအရာရောက်မှုဟာ လူ့ဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်စပ်ယှက်နွယ်နေတယ်ဆိုတာ နက်နဲသိမ်မွေ့စွာ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ပီပြင်စွာ ဖန်တီးထားတဲ့ဝတ္တုတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတော့ စာအုပ်ကို ကိုယ်တိုင်ပဲ အချိန်ယူ ဖတ်ကြည့် ကြဖို့ ညွှန်းလိုပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ချင်သူများအတွက် James Hilton ရဲ့ Original Book ကိုပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံလေးတွေ တွေ့သမျှ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Photo shows the Jinsha River turning round in Shangri-la,amythical enchanting wonderland in Diqing County, southweat China's Yunan Province.
Photo shows the Tibetan dagobas standing at the foot of the Mount Meili in Shangri-la,amythical enchanting wonderland in Diqing County, southweat China's Yunan Province.
1) Wiki - Shangri-La
2) Shangri-la, paradise on earth
3) Lost Horizon
Posted by စုချစ် at 1/10/2013 10:13:00 AM3comments: Links to this post
၂၀၁၃.. လာ ... အတူ သွားမယ် !!!
2013 New Year Resolution ...
I don't want to be Great but REAL !!!
I won't be bothering with competition or any comparison !!!
I be ordinary, simple & I will enjoy my life as it is !!!
YES, I will enjoy being alive !!!
ကျွန်မတို့အတွက်၂၀၁၃ ခုနှစ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့၂၀၁၂ခုနှစ် လို ရိုးရှင်းစွာနဲ့ ဖြတ်ကျော်ရအုံးမှာပဲ။ အရင်တုန်းကတော့ အခက်အခဲဆိုတာတွေ လောကဓံ ဆိုတာတွေ ကို ကျော်ဖြတ်သင့်သလောက် ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်၊ လောကကြီးမှာ ၀ဲလည်နေသရွေ့ လောကဓံဆိုတာကတော့ တွေ့ကြုံနေရအုံးမှာပဲ။ အခက်အခဲတွေ့တိုင်း များသောအားဖြင့်တော့ မကြောက် မရွံ့ခဲ့ဘူး၊ ကိုယ့်ဘ၀က မိသားစုကို ဦးဆောင်ပေးရတဲ့ ဘ၀ဆိုတော့ ကြောက်ချင်ရင်တောင်မှ ထိုင်ကြောက်နေရအောင် အခွင့်မပေးခဲ့တာ၊ ဘေးနားက ကျွန်မရဲ့ ဘ၀အဖေါ်က စိတ်ဓာတ်အင်အား ဖြည့်ပေးခဲ့တာတွေဟာ ကျေးဇူးတင်စရာပဲ၊ ဒါကြောင့် အခက်အခဲဆိုတာ ကျော်ဖြတ်ပြီးရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်ချက်က ပိုပြီး ခိုင်မာလာမြဲ၊ ပိုပြီး စွန့်စားရဲတဲ့ စိတ်တွေ ၀င်လာစမြဲ၊ အခု အသက်၄၀ကျော်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ အရင်လို သိပ်ပြီး Eager မဖြစ်တော့တာ တွေ့ရတယ်။
ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဘ၀လေးကို အေးအေးချမ်းချမ်း နေချင်စိတ်ပဲ ၀င်လာတော့တယ်။ ဘယ်သူနဲ့မှလည်း အတိုက်အခံ မလုပ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို မကြိုက်တဲ့သူ ရှိရင် အဲဒီသူနဲ့ ဝေးဝေးမှာ ရှောင်နေပေးပါမယ်။ ကိုယ့်ကို တခြားသူတွေ ချစ်အောင်လည်း တမင်မလုပ်ပါဘူး။ အရှိကို အရှိအတိုင်း နေချင်ပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်ချက်တွေ မထုတ်ဘူး၊ ပြိုင်လည်း မပြိုင်ဆိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ထက် အောင်မြင် အဆင်ပြေနေတဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်ထက် ပိုပြီး ကြိုးစားအားထုတ်မှု ရှိခဲ့လို့ပဲ။ ကိုယ်မလုပ်လို့ ကိုယ်မရတာဟာ ကိုယ်တကယ်မလိုချင်လို့လည်း ဖြစ်မယ်၊ လိုအပ်သလောက်ကြိုးစားအားထုတ်မှု မပြုခဲ့လို့လည်း ဖြစ်မယ်။ ကိုယ့်ဘ၀မှာ မရခဲ့တာတွေဟာ ကိုယ်တကယ်မလိုချင်တာမို့ အဲသာတွေအတွက် ခေါင်းထဲထား ၀မ်းမနည်းအားဘူး။
ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် မနက်ဆို အတူတူ ရုံးသွား၊ ညနေ ရုံးကနေ အတူတူ ပြန်ကြ၊ အပြန်နောက်ကျတဲ့ နေ့ဆိုရင် လမ်းက အဆင်ပြေတဲ့ ဆိုင်မှာ ညစာ ၀င်စား၊ နည်းနည်းစောရင်တော့ အိမ်ပြန်ရောက်မှ ညစာချက်စား၊ ပြီးရင် သတင်းနားထောင်၊ ဘုရားရှိခိုး၊ တရားထိုင်။ အိပ်ခါနီးတော့ လောလောဆယ် ဖတ်နေတဲ့ စာအုပ်တွေ အကြောင်း သူ့ကို ပြောပြ။ တစ်ပတ်မှာ ၂ခါ ၃ခါလောက် တရားစာ ဖတ်ပြ။ သူသည် စာဖတ်ပျင်းတဲ့ အတွက် တခြားတစ်ယောက်က စာရှင်းပြသလို ရှင်းပြတာကို မျက်လုံးမှိတ် နားထောင်ရတာပိုပြီး ၀ါသနာပါသောကြောင့် ကျွန်မက စာဖတ်ပြီး ပြန်ရှင်းပြရမြဲ။ ပြီးတော့ ဖတ်တဲ့ စာအကြောင်း အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး။ ကျွန်မ မှားနေတာ ရှိရင် သူက ထောက်ပြ ပြင်ပေး။ ၂၀၁၃ မှာတော့ သူ့ကို တရားစာ ဖတ်ပြတာ အချိန် များများ ပိုရအောင် လုပ်ချင်ပါတယ်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက် အားရက်တွေမှာ ပန်းချီ များများ ဆွဲနိုင်အောင် ကြိုးစားချင်ပါတယ်။ စာများများ ဖတ်နိုင်အောင်၊ ရေးချင်တဲ့စာတွေ တကယ်ရေးဖြစ်အောင် လုပ်ချင်ပါတယ်။ ခေါင်းထဲမှာ စီထားပြီး ပျောက်သွားတာမျိုး မဖြစ်ချင်တော့ပါဘူး။ ကျန်းမာရေး အတွက် ကိုယ်လက် ကြံ့ခိုင်မှု အနေနဲ့ မနက်စောစော ပိတ်ရက်များမှာ သူနဲ့ အတူ လမ်းထလျှောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါမယ်။
နှစ်ဘက်မိဘ လူကြီးတွေ အသက်ကြီးလာကြပြီမို့ သူတို့ အတွက် ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုပြု စောင့်ရှောက်ပေးရပါမယ်။ လိုအပ်တဲ့ ဆေးတွေ ဒီကနေ ရှာကြံ ၀ယ်ပြီး ပို့ပေးတယ်။ တရား အလုပ် များများ လုပ်ဖြစ်အောင် သားသမီးတွေ အတွက် စိတ်မပူရအောင် တိုက်တွန်းရမယ်။
ကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ ဖေဖေါ်ဝါရီလလယ် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးမှာ မလေးရှား တရားစခန်းဝင်ဖြစ်မယ်။ အဲဒီ မလေးရှား တရားစခန်းက ၆ဧကလောက်ကျယ်တဲ့ တောင်ကုန်းတွေ ပတ်လည် ၀န်းရံနေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းကြီးထဲမှာ လုပ်မှာ၊ မနှစ်ကတော့ ဗော်လံတီယာ လုပ်မယ့်သူ နည်းနေလို့ ဗော်လံတီယာ လုပ်ပေးရတယ်၊ ဒီနှစ်တော့ အေးအေးချမ်းချမ်း တရားထိုင်ချင်တာမို့ လုပ်အားပေး အတွက် တခြား ငယ်တဲ့သူတွေ ရှာပါလို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ကြိုတင်တောင်းပန်ထားတယ်။ ဟိုးအရင် ဘယ်တုန်းကမှ တရားကို စိတ်ဝင်စားသူ မဟုတ်တဲ့ သူကိုယ်တိုင် တက်တက်ကြွကြွ နဲ့ တရားဝင်ချင်နေတာတွေ့ရလို့ ၀မ်းသာမိတယ်။ သူဟာ ကျွန်မ ကို ဘ၀မှာ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း နဲ့ စိတ်ချမ်းသာစွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်အောင် စောင့်ရှောက်ကူညီပေးတဲ့သူ တနည်းအားဖြင့် ကျွန်မရဲ့ ကျေးဇူးရှင်လို့ ပြောနိုင်သမို့ ကိုယ့်ကြောင့် သူဟာ တရားကို စပြီး စိတ်ဝင်စားလာတာဖြစ်လို့ ဒီနည်းဟာ ကျွန်မရဲ့ ဘ၀အဖေါ်မွန်ကို အကောင်းဆုံး ကျေးဇူးဆပ်နည်း လို့ ထင်တာပါပဲ။
ကျွန်မတို့ မတ်လမှာ ခရီးတိုလေး တစ်ခု ထွက်မယ်၊ သူက ရုံးအားရက်မယ် ၃ - ၄ရက် လောက် လျှောက်လည်ချင်တယ် ပြောလို့ လေယာဉ်လက်မှတ် ဟော်တယ် ဘုတ်ကင်ကြည့်ရအုံးမယ်။
နှစ်လည် မေ၊ ဇွန်လ မှာတော့ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်ပြန်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်၊ ဒီတစ်ခါ သူ့ အဖေ နဲ့ အမေကို ခေါ်ပြီး ငပလီ လိုက်ပို့ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။ ငပလီကို ပြည်၊ တောင်ကုပ်ကနေ တဆင့် အိမ်က ကားကို မောင်းပြီး သွားမယ်။ ပြည်မှာ အိပ်မယ်။ တောင်ကုပ် က ဆရာအိမ်ကို ၀င်လည်မယ်။ ပြီးတော့ ငပလီမှာ ၃ည နေမယ် ဆိုလားပဲ။ ဒါတော့ နီးမှပဲ ဟော်တယ်တွေ စုံစမ်းတော့မယ်။ နောက်နှစ်ဝက် ၂၀၁၃ နှစ်ကုန်ပိုင်း အတွက် ခရီး ထွက်ချင်တဲ့ အစီအစဉ်လည်း နီးမှပဲ စဉ်းစားမယ်။
အလုပ် အနေနဲ့တော့ လက်ရှိ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ အလုပ်က အဆင်ပြေတဲ့ အတွက် ဘယ်ကိုမှ ပြောင်းဖို့ ပြုဖို့ မတွေးမိဘူး၊ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေအောင် လုပ်ပေးဖို့ပဲ ခေါင်းထဲရှိတယ်။
အချုပ်အားဖြင်တော့ ၂၀၁၃ခုနှစ် မှာ ကျွန်မတို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကောင်းအောင်၊ သတိနဲ့ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့် အနီးအနား မှာ ရှိတဲ့ မိဘ မောင်နှမ ဆွေမျိုး သားချင်း မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းများကို စိတ်ချမ်းသာအောင် စောင့်ရှောက် ကူညီနိုင်သူများ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဟာ ခုချိန်ထိ သတိတရား နဲ့ အသက်ရှင်ပြီး နေနိုင်သေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by စုချစ် at 1/04/2013 01:22:00 PM2comments: Links to this post
Labels: Personnel, ကိုရေချမ်း နဲ့ မရွှေစု
နိုလှိုင်း ● ဦးထုပ်​​တွေအ​ကြောင်း
မိုင်းဖြတ်မြို့ မှာ သုံးဘီးယာဉ် တိမ်းမှောက် (၃)ဦး သေဆုံးပြီး (၃)ဦးဒဏ်ရာ ရရှိ